WRD mideyso LINE LOOGU TALAGGALAY LA guud iyo rakibaadda
Our line-soo-saarka mideyso ayaa galay rakibo of qalab ugu muhiimsan. The injineer guud WRD goobta yimid shaqsi ahaan, ma aha oo kaliya xalin dhibaatadda of qaybo habboon ee labada dhinac loogu talagalay macaamiisha, laakiin sidoo kale sameeynay qorshe iskaashi ee labada dhinac, taas oo ka dhigtay p rakibo ...
Kale Five ku macneysey Common iyo Tallaabooyinka ay ka hortag ah ee Alxanka Frequency Sare
High-noqnoqoshada tuubooyinka welded laga yaabaa in cilladaha kala duwan, iyo cilladaha ma yihiin si buuxda u labisan. Isku dhafan oo sifooyinka of-soo-saarka iyo biibiilaha our welded, waxaa jira dhowr cilladaha in inta badan dhacaan: 1 inclusions; 2 isuga aan ku filneyn; 3 dhabta ah, 4 Cast alxanka, 5 godad Air; 6 bood ...
Macneysey Common iyo tallaabooyinka ka hortagga ee Alxanka Frequency High - inclusions
High-noqnoqoshada tuubooyinka welded laga yaabaa in cilladaha kala duwan, iyo cilladaha ma yihiin si buuxda u labisan. Isku dhafan oo sifooyinka of-soo-saarka iyo biibiilaha our welded, waxaa jira dhowr cilladaha in inta badan dhacaan: 1 inclusions; 2 isuga aan ku filneyn; 3 dhabta ah, 4 ridaya iyo alxanka, 5 godad Air; ...
Waxyaabaha Xulashada iyo Dayactirka HF welded tuuboyinka Rollers
Sida qalab ugu muhiimsan ee wax soo saarka ee beebka welded, xulashada, isticmaalka iyo dayactirka ee wax duudduuban leeyihiin saameyn muhiim ah oo ku saabsan nolosha iyo dhaqaalaha of kitaabkii duudduubnaa ee. Marka duudduuban hallaabo oo burbursan ee isticmaalka, waxa la burburinayo karo, oo kaliya duub qaar ka mid ah waxaa cusboonaysiiyey by laser alxanka cladding, ...
WRD LINE mideyso LA rakibay ee South Asia
Iyada oo ay ka imanayaan guul shixnaddii ee la soo dhaafay, kuleyliyaha of line mideyso our bilaabayaan inay la rakibay hoos amarka of our shaqaalaha farsamada iyo rakibidda. line-soo-saarka Tani waxay u fududaynaya tuubooyin bir leh dhexroor ka 2 inch si 6 inch, dheer 5.8 si 6.4 mitir. mideyso The lin ...
WRD LINE mideyso ku saabsan yahay in rakibo South Asia
Iyada oo wax badan la soo dhaafay ee Hot-rusheeyey line mideyso si guul geeyey. Our shaqaalaha farsamada iyo rakibaadda oo ku saabsan in ay dejiyaan iyo rakibi line dhagax wax yihiin. line-soo-saarka Tani waxay u fududaynaya tuubooyin bir leh dhexroor ka 2 inch si 6 inch, dheer 5.8 si 6.4 mitir. line The mideyso waa desig ...
Dhoofinta DAILY WRD EE - HOT ay cagahoodu galeen mideyso LINE Mill tuubo dhoofiyo suunka IYO WADDADA dalka
Iyada oo laga jawaabayo baaqa ah "ayuu Belt iyo Road", waxaan dhoofin saarka iyo technology in dalalkaas. waxaan dhawaan ayaa dhameystirtay soo saarka, kormeerka tayada, guddoominta of qayb 2 "-6" tuubooyin bir line mideyso kulul-rusheeyey, oo si guul ah laga dhoofiyey 16, November 20 ...
Shiinaha International Import Expo-WRD
Nov. 5 - Nov. 10 waa toddobaadkii aan caadi ahayn, waayo, Shanghai, iyo our WRD waxaa sidoo kale todobaadkii aad u badan dhala. The China International Import Expo, qabanqaabisay Wasaaradda Ganacsiga oo ka mid ah Dadka Republic of China iyo Dawlada Hoose ee Shanghai Dadka, ujeedadiisu tahay in shirkadda ...
Shiinaha International Import Expo
On November 5, 2018, in ay jawaab u yeedho gudoomiyaha Xi Jinping, kooxda injineer WRD si firfircoon u tageen inay Shanghai Center Exhibition National inay ka qayb galaan ugu horeysay Shiinaha International Import Expo. Our shirkadda WRD, inta badan soo saartaa HF welded line dhagax tube, mideyso line dhagax tube, SSAW tube mi ...
Dhoofinta DAILY WRD EE - THE MAKIINADDA biibiile toosinta dhoofiyo suunka IYO WADDADA dalka
Iyada oo laga jawaabayo baaqa ah "ayuu Belt iyo Road", waxaan dhoofiyaan xoolahooda iyo technology in dalalkaas. waxaan dhawaan uu dhammaystay wax soo saarka, kormeerka tayada, guddoominta of toosinta mashiinka biibiile, iyo si guul ah laga dhoofiyey 29, October 2018 mashiinka biibiile toosinta waa qalab f ...
WRD ee maalin kasta dhoofinta - rusheeyey line kulul mideyso dhoofiyo dalka Belt iyo Road ah
Si aad u jawaabaya call ee "ayuu Belt iyo Road", waxaan dhoofiyaan xoolahooda iyo technology in dalalkaas. waxaan dhawaan uu dhammaystay wax soo saarka, kormeerka tayada, guddoominta of 2 "-6" tuubooyin bir kulul-koosaarta u mideyso line, iyo si guul ah laga dhoofiyey on 22th, October 2018 mideyso Hot-maquufin i ...
Dhibaatooyinka caadiga ah iyo daaweynta pi steel ...